जोखिममा बालबालिका- लुम्बिनी - कान्तिपुर समाचार
कोरोना हटस्पट लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वतयारी शून्य
जेष्ठ २५, २०७८ सन्जु पौडेल, कमल पन्थी
लुम्बिनी/बर्दिया — कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरले बालबालिकालाई बढी असर गर्ने भन्दै विज्ञहरूले अस्पतालमा निश्चित बेड छुट्याएर आवश्यक तयारी गर्न सुझाव दिएका छन् । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा हटस्पट बनेको लुम्बिनी प्रदेशमा बालबालिकालाई संक्रमणबाट जोगाउन कुनै तयारी छैन ।
यहाँका अस्पतालले बालबालिकाका लागि बेड छुट्याएका छैनन् । अन्य पूर्वतयारी पनि कतै देखिँदैन । गत वर्षदेखि बालबालिका संक्रमित भइरहेका छन् । यस क्रममा बालबालिकाको मृत्युसमेत भइरहेको छ । तर, उनीहरूको उपचारका लागि छुट्टै व्यवस्था छैन । संघीय सरकारले प्रदेशमा बालबालिकाका लागि बेड छुट्याउन परिपत्र गरे पनि त्यसको सुनुवाइ नभइरहेको सरोकारवालाले बताए ।
अहिलेसम्म बालबालिकालाई वार्डमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका नआएको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले बताए । प्रदेशका अस्पतालमा अहिले ३३ बाल रोग विशेषज्ञ कार्यरत छन् । कोरोनाको तेस्रो लहर आउने निश्चितजस्तै देखिएको बुटवलस्थित आम्दा अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. सन्तोष पोखरेलले बताए । ‘पहिलो लहरले वृद्धवृद्धालाई बढी असर गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको भेरियन्टले युवामा असर देखिएकाले तेस्रोले बालबालिकालाई हानि गर्छ भनिएको हो ।’ समस्या आउनुपूर्व नै तयारी गर्नु राम्रो हुने उनले बताए । बालबालिकामा संक्रमण भएपछिको एन्टीबडी विकासको तथ्यांक हेर्दा ठूला मान्छेसरह २५ प्रतिशत देखा परेकाले अहिलेसम्म धेरै असर गरेको नपाइएको उनले जनाए ।
पछिल्लो अध्ययनले संक्रमितको फोक्सोमा रगत जमेर मृत्यु भएको समेत देखाइरहेकाले रगत पातलो बनाउने औषधिको प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आएको डा. गौतमले बताए । ‘बालबालिकामा त्यो समस्या हुँदैन,’ उनले भने, ‘बालबालिकाका लागि अस्पतालमा बेड मात्रै नभई उनीहरूको उमेर समूहअनुसारका अन्य विषयमा समेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ अहिले काम गरिरहेका चिकित्सकबाहेक थप नर्सिङ स्टाफ र स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक पर्ने भन्दै उनले जनशक्तिको व्यवस्थापन, तालिमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । पाँच वर्षमुनिका बालबालिका आएमा आइसोलेसनमा राख्न नमिल्ने भएकाले त्यस उमेर समूहका संक्रमित भइहालेमा आमासँग राखेर खोप दिने र सुरक्षित बनाई हाल्नुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै, पाँच वर्षमाथिका र १० वर्षमाथिका बालबालिकालाई मानसिक दबाब नपर्ने गरी उपचार विधि अपनाउनका लागि बाल चिकित्सकीय तालिम दिई स्वास्थ्यकर्मी खटाउनुपर्ने उनले बताए ।
संघीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट तयारीका लागि पत्र आएको र सोही अनुसार गर्न थालिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका कोरोना फोकल पर्सन कौशल भण्डारीले बताए । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशभरि पाँच वर्षमुनिका ६ सय ८४ बालबालिका संक्रमित छन् । जसमध्ये शून्य दशमलव ९ प्रतिशतलाई मात्र समस्या देखा परेको भण्डारीले बताए । पाँच वर्षमाथिका बालबालिकाको तथ्यांक नरहेको भन्दै उनले धेरै संख्यामा संक्रमित नभेटिएकाले तथ्यांक नरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेशमा अहिले १ सय ५ बालबालिका सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना अस्पतालमा बालबालिकाका लागि २० प्रतिशत बेड छुट्याउन पत्राचार गरेको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म सरकारी अस्पतालमा बालबालिकाका लागि फरक बेड छैनन्,’ उनले भने, ‘अब त्यसका लागि काम गर्नेछौं ।’
बर्दियामा बालबालिकालाई हेर्ने विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव छ । बालबालिकालाई संक्रमण भए छुट्टै कोभिड अस्पताल पनि छैन । जिल्लामा एउटा पनि बालबालिकाका लागि विशेष अस्पताल नहुँदा स्थानीयले सास्ती भोग्न बाध्य छन् । स्थानीयका अनुसार परिवार नै कोरोना संक्रमण हुनासाथ बालबालिका अछुतो रहँदैनन् । तर, बालबालिका हेर्ने चिकित्सक नहुँदा अस्पताल लैजाने वातावरण छैन ।
जिल्लामा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर फैलिए सबैभन्दा बढी बालबालिका संक्रमित हुने जोखिम रहेको चिकित्सकले बताएका छन् । चिकित्सकका अनुसार यस्तो अवस्था आए सरकारी तयारी खासै नभएको गुनासो पोख्छन् । २ वर्षदेखि १६ वर्षमाथिकाका लागि कुनै खोप नआएको जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सुभाष पाण्डेयले बताए । जिल्लामा हाल १ वर्षदेखि ११ वर्षसम्मका बालबालिका कोरोना संक्रमित भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । शनिबारसम्म २७ जना बालक र २२ जना बालिका संक्रमित भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
कोरोना संक्रमित बालबालिका होम आइसोलेसनमा बसेका छन् । दोस्रो चरणको कोरोना फैलिएपछि १ सय ८२ जना बालबालिका निको भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । तीमध्ये बालक ९६ र बालिका ८३ रहेका छन् । ठाकुरबाबा नगरपालिकामा ११ बालबालिका होम आइसोलेसनमा रहेका छन् । गुलरिया र बाँसगढी नगरपालिकामा ८/८ जना, बारबर्दियामा ६, राजापुरमा पाँच जना बालबालिका कोरोना संक्रमित भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७८ ०७:५१
६० देखि ६४ वर्षकालाई आजदेखि खोप
उपत्यकामा पहिलो मात्रा लगाएकाले दोस्रो मात्रा आफू रहेकै ठाउँमा लिन पाउने
जेष्ठ २५, २०७८ मकर श्रेष्ठ
काठमाडौँ — सरकारले मंगलबारबाट मुलुकभर कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान चलाउँदै छ । चीनबाट अनुदानमा प्राप्त १० लाख भेरोसेल खोप काठमाडौं उपत्यकामा ६० देखि ६४ र बाहिर ६२ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहकालाई लगाउन लागिएको हो ।
चीनसँग सिमाना जोडिएका स्थानीय तहमा १८ वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगाइने स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक गौतमले बताए । यसअघिको निर्णयमा चीनसँग जोडिएका जिल्लाका १८ वर्षमाथिका नागरिकलाई नै खोप दिने निर्णय भएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय गरेर देशभरिका ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई खोप दिने निर्णय गरेको थियो । यो उमेर समूहमा ८ लाख जनसंख्या रहेकाले खोप पर्याप्त नहुने भएकाले उपत्यकाबाहिर उमेर समूह घटाउनु परेको गौतमले बताए । उपत्यकाबाहिर खोप लगाउँदा पहिलो प्राथमिकता ६४ वर्षकालाई, त्यसपछि खोपको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः तल्लो उमेरकालाई दिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले सूचना जारी गरेको छ ।
खोप अभियानमा यसअघि खोप लगाउन छुटेका स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल कलेजका विद्यार्थी, इन्टर्न, ओजेटीमा रहेका नर्सिङ र पारामेडिक्सले भने पहिलो डोज पनि लगाउन पाउनेछन् । त्यस्तै यसअघि ५५ वर्षमाथि उमेर समूहमा खोप दिइसकेका हिमाली जिल्लाहरूले यही उमेर समूहमा पहिलो मात्रा लगाउन छुटेका व्यक्तिले पनि पहिलो मात्रा लगाउन पाउनेछन् । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो मात्रा भेरोसेल लिएर विभिन्न कारणले उपत्यकाबाहिर रहेकाले पनि दोस्रो मात्रा आफू रहेकै ठाउँमै लिन पाउने छन् ।
जिल्लामा उपलब्ध खोपको आधारमा कति उमेर समूहलाई लगाउने र खोप कार्यक्रम कति दिनसम्म चलाउने निर्णय जिल्लामा कोभिडविरुद्धको खोप समन्वय तथा अनुगमन समितिले गर्नेछ । समितिको संयोजकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् । ‘यो समितिले कति वटा खोप केन्द्र कहाँ–कहाँ राख्ने र कति दिन चलाउने भन्ने निर्णय गर्न सक्छ,’ गौतमले भने । स्थानीय तहले निर्धारण गरेको खोप केन्द्रमा उमेर खुल्ने सरकारी कागजपत्र देखाएको आधारमा खोप लगाउन सकिन्छ ।
सबै नागरिक खोप लगाउन आएमा खोप नपुग्ने भएकाले उमेर समूह घटाउनुपरेको उनले बताए । ‘दोस्रो खोप सुनिश्चित हुने गरी अहिले खोप लगाउँछौं,’ उनले भने । यसअघि कोभिसिल्डमा खोपको दोस्रो डोज सुनिश्चितता नगरी खोप लगाउँदा साढे १४ लाखले अझै खोप लगाउन पाएका छैनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोभिसिल्ड लगाएको तीन महिनाभित्र दोस्रो मात्रा लगाएमा खोपको प्रभावकारिता हुन्छ ।
खोप आउने निश्चित नभएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले सूचना जारी गरेर कोभिसिल्डको विकल्पमा एउटै प्रकृतिको अस्ट्राजेनेका खोप प्राप्त हुनेबित्तिकै लगाउने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार २१ लाख १३ हजार ८० जनाले खोपको पहिलो मात्रा र ७ लाख १५ हजार १ सय ६३ जनाले दोस्रो मात्रा लगाएका छन् ।
प्राथमिकता खोप : स्वास्थ्यमन्त्री
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङले सबै नेपालीलाई खोप दिने सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए । ‘जसरी भए पनि छिटो खोप ल्याएर सबै नेपालीका लागि खोप सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य छ, खोपको सहज उपलब्धताका लागि मेरो पहिलो प्रथामिकता हुनेछ,’ मन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलोपटक सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘केही महिनाभित्र सबै नेपालीलाई खोप दिन उत्पादक देशबाट ल्याउन सबै उपाय लगाइनेछ ।’